‘बैंक भनेको के हो ? थाहा नपाउने जनतालाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विकास बैंकहरु नै हुन्’ |
Agriculture Development Bank Limited 418.00 (59854) (-4)
Ankhu Khola Jalvidhyut Company Limited 75.00 (1490) (0)
Api Power Company Ltd. 148.00 (20732) (0)
Arambha Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. 560.00 (385) (1)
Arun Kabeli Power Ltd. 188.00 (9209) (-4)
Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. 108.00 (7072) (1)
Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd 449.00 (1790) (7)
Asian Life Insurance Co. Limited 431.00 (1436) (1)
Bank of Kathmandu Ltd. 276.00 (28835) (-3)
Best Finance Company Ltd. 106.00 (14095) (9)
Butwal Power Company Limited 428.00 (105890) (23)
Central Finance Co. Ltd. 114.00 (3414) (1)
Century Commercial Bank Ltd. 168.00 (58668) (0)
Chautari Laghubitta Bittya Sanstha Ltd 460.00 (840) (-2)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited 941.00 (4263) (-7)
Chhyangdi Hydropower Ltd. 100.00 (133) (1)
Chilime Hydropower Company Limited 525.00 (5013) (0)
Citizen Bank International Limited 229.00 (22558) (-4)
Citizen Investment Trust 2,610.00 (1264) (-20)
Citizens Mutual Fund -1 9.90 (1000) (-0.18)
City Express Finance Co. Limited 97.00 (4210) (-3)
Civil Bank Ltd 148.00 (18343) (0)
Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 547.00 (594) (-18)
Corporate Development Bank Limited 122.00 (4810) (11)
Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 740.00 (2797) (-9)
Deva Bikas Bank Limited 151.00 (117493) (4)
Dibyashwori Hydropower Ltd. 71.00 (214) (-1)
Everest Bank Limited 662.00 (8935) (-11)
Everest Insurance Co. Ltd. 423.00 (989) (-1)
Excel Development Bank Ltd. 308.00 (804) (2)
First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 405.00 (1252) (-4)
Forward Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. 1,510.00 (2894) (-7)
Gandaki Bikas Bank Limited 218.00 (13443) (-2)
Garima Bikas Bank Limited 229.00 (25735) (-3)
Ghalemdi Hydro Limited 122.00 (30) (-5)
Global IME Bank Limited 310.00 (12290) (0)
Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 1,241.00 (585) (13)
Goodwill Finance Co. Ltd. 122.00 (2045) (1)
Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 354.00 (3837) (-6)
Green Development Bank Ltd. 111.00 (4035) (-1)
Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. 124.00 (4559) (-2)
Gurans Life Insurance Company Ltd. 555.00 (2181) (-2)
Gurkhas Finance Ltd. 111.00 (44799) (3)
Himalayan Bank Limited 600.00 (8212) (-10)
Himalayan Distillery Limited 1,999.00 (41624) (50)
Himalayan General Insurance Co. Ltd 380.00 (2757) (-3)
Himalayan Power Partner Ltd. 181.00 (410) (3)
Hydroelectricity Investment and Development Company Ltd 158.00 (27247) (-1)
ICFC Finance Limited 165.00 (6110) (-6)
IME General Insurance Ltd. 422.00 (5048) (-8)
Janaki Finance Ltd. 173.00 (4302) (3)
Janata Bank Nepal Ltd. 204.00 (52053) (0)
Janautthan Samudayic Laghubitta Bikas Bank Ltd. 2,160.00 (912) (41)
Jyoti Bikas Bank Limited 150.00 (46351) (0)
Kailash Bikas Bank Ltd. 228.00 (5286) (-7)
Kalika power Company Ltd 90.00 (750) (-2)
Kamana Sewa Bikas Bank Limited 159.00 (25009) (-3)
Kanchan Development Bank Limited 177.00 (346) (-3)
Kankai Bikas Bank Ltd. 140.00 (5665) (-7)
Karnali Development Bank Limited 110.00 (2595) (-3)
Khanikhola Hydropower Co. Ltd. 69.00 (249) (1)
Kumari Bank Limited 218.00 (36182) (-3)
Laxmi Bank Limited 223.00 (33704) (-4)
Laxmi Equity Fund 8.05 (18500) (-0.2)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 755.00 (1365) (-20)
Life Insurance Co. Nepal 1,870.00 (1442) (-2)
Lumbini Bikas Bank Ltd. 205.00 (32241) (-5)
Lumbini General Insurance Co. Ltd. 503.00 (10004) (-2)
Machhapuchhre Bank Limited 270.00 (29364) (0)
Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. 199.00 (10272) (-8)
Mahuli Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 1,123.00 (286) (-12)
Manjushree Finance Ltd. 118.00 (3756) (1)
Mega Bank Nepal Ltd. 197.00 (106359) (0)
Mega Bank Nepal Ltd. Promoter Share 110.00 (24209) (0)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. 608.00 (193) (-7)
Miteri Development Bank Limited 252.00 (251) (-5)
Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited 473.00 (219) (-37)
Mountain Hydro Nepal Limited 97.00 (1540) (3)
Muktinath Bikas Bank Ltd. 375.00 (14780) (-8)
Multipurpose Finance Company Limited 181.00 (186) (16)
Nabil Bank Limited 830.00 (5507) (-13)
NABIL Bank Limited Promotor Share 808.00 (4410) (-10)
Nabil Equity Fund 8.53 (15139) (-0.17)
Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 472.00 (3220) (0)
National Hydro Power Company Limited 68.00 (3360) (2)
National Life Insurance Co. Ltd. 658.00 (5835) (-8)
National Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. 1,630.00 (70) (-20)
Naya Nepal Laghubitta Bikas Bank Ltd. 409.00 (555) (-16)
Neco Insurance Co. Ltd. 515.00 (12438) (-8)
Nepal Bangladesh Bank Limited 225.00 (34074) (-3)
Nepal Bank Limited 338.00 (677987) (2)
Nepal Community Development Bank Ltd. 143.00 (8536) (0)
Nepal Credit & Commercial Bank Ltd. Promoter Share 130.00 (24669) (0)
Nepal Credit And Commercial Bank Limited 257.00 (54082) (0)
Nepal Doorsanchar Comapany Limited 735.00 (50050) (6)
Nepal Hydro Developers Ltd. 160.00 (300) (2)
Nepal Insurance Co. Ltd. 399.00 (4280) (3)
Nepal Investment Bank Limited 542.00 (18522) (-1)
Nepal Investment Bank Ltd. Promoter Share 510.00 (5145) (0)
Nepal Life Insurance Co. Ltd. 936.00 (12972) (-19)
Nepal SBI Bank Limited 480.00 (7962) (-2)
Nepal Seva Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 453.00 (210) (-3)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited 520.00 (2025) (-10)
Ngadi Group Power Ltd. 125.00 (10) (1)
NIBL Pragati Fund 7.86 (14761) (-0.14)
NIBL Samriddhi Fund 1 9.50 (2500) (-0.05)
NIC Asia Bank Limted Promoter Share 272.00 (2823) (0)
NIC Asia Bank Ltd. 483.00 (38921) (-1)
NIC Asia Growth Fund 9.66 (8350) (-0.09)
Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 866.00 (320) (-5)
NLG Insurance Company Ltd. 819.00 (4709) (-9)
NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. 1,010.00 (35) (-19)
NMB Hybrid Fund L-1 9.71 (28217) (-0.27)
NMB Sulav Investment Fund-1 10.75 (13988) (0.08)
Oriental Hotels Limited 638.00 (12105) (8)
Panchakanya Mai Hydropower Ltd 110.00 (950) (1)
Panchthar Power Company Ltd. 190.00 (50) (-16)
Pokhara Finance Ltd. 139.00 (7922) (-1)
Prabhu Bank Limited 280.00 (80103) (2)
Prabhu Insurance Ltd. 409.00 (4461) (-9)
Premier Insurance Co. Ltd. 1,199.00 (14126) (-26)
Prime Commercial Bank Ltd. 366.00 (44565) (-3)
Prime Commercial Bank Promoter Share 201.00 (147005) (0)
Prime Life Insurance Company Limited 472.00 (2963) (-11)
Prudential Insurance Co. Ltd. 713.00 (1651) (-26)
Radhi Bidyut Company Ltd 160.00 (763) (-5)
Rairang Hydropower Development Company Ltd. 93.00 (370) (-1)
Rastriya Beema Company Limited 10,870.00 (371) (-300)
Rastriya Beema Company Limited Promoter Share 10,002.00 (1147) (-263)
Reliance Finance Ltd. 134.00 (26013) (-6)
Ridi Hydropower Development Company Ltd. 94.00 (419) (-5)
RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 665.00 (3448) (-15)
RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 381.00 (1857) (-8)
Sagarmatha Insurance Co. Ltd. 1,383.00 (5003) (-47)
Sahayogi Bikas Bank Limited 204.00 (5270) (6)
Samata Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. 1,315.00 (603) (13)
Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 547.00 (920) (-23)
Sana Kisan Bikas Bank Ltd 987.00 (1977) (-13)
Sanima Bank Limited 360.00 (18278) (-2)
Sanima Equity Fund 9.60 (26300) (-0.2)
Sanima Mai Hydropower Ltd. 269.00 (16501) (1)
Shangrila Development Bank Ltd. 151.00 (6035) (-7)
Shikhar Insurance Co. Ltd. 857.00 (7547) (-13)
Shine Resunga Development Bank Ltd. 260.00 (2930) (0)
SHIVAM CEMENTS LTD 595.00 (399171) (-34)
Shree Investment Finance Co. Ltd. 159.00 (5267) (0)
Shrijana Finance (Bittaya Sanstha) 219.00 (80) (4)
Siddhartha Bank Limited 337.00 (25995) (-3)
Siddhartha Equity Fund 9.56 (32000) (-0.11)
Siddhartha Equity Orineted Scheme 10.35 (16600) (-0.05)
Siddhartha Insurance Ltd. 581.00 (7160) (-13)
Sindhu Bikash Bank Ltd 153.00 (21910) (13)
Soaltee Hotel Limited 237.00 (11922) (-2)
Sparsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 365.00 (10) (17)
Standard Chartered Bank Limited 689.00 (4787) (-1)
Summit Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 581.00 (651) (10)
Sunrise Bank Limited 260.00 (28735) (2)
Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. 504.00 (200) (42)
Surya Life Insurance Company Limited 590.00 (13945) (-13)
Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 821.00 (314) (-15)
Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 906.00 (829) (-26)
Swadeshi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 610.00 (1678) (-7)
Swarojgar Laghu Bitta Bikas Bank Ltd. 474.00 (1372) (-9)
Synergy Power Development Ltd. 93.00 (811) (-1)
Uniliver Nepal Limited 20,000.00 (10) (0)
United Finance Ltd. 185.00 (563) (2)
United Insurance Co. (Nepal) Ltd. 923.00 (2613) (-32)
United Modi Hydropower Ltd. 117.00 (3133) (2)
UNIVERSAL POWER COMPANY LTD 92.00 (7530) (-1)
Unnati Micorfinance Bittiya Sanstha Ltd. 1,090.00 (440) (-50)
Upper Tamakoshi Hydropower Ltd 253.00 (118603) (8)
Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 575.00 (122) (-3)
‘बैंक भनेको के हो ? थाहा नपाउने जनतालाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विकास बैंकहरु नै हुन्’
कर्पोरेट नेपाल २२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार अन्तरवार्ता
मर्जर र एक्विजिशनले विकास बैंकहरुको संख्या घटदो क्रममा छ । सीमित संख्यामा रहेका विकास बैंकहरुको संख्या अझै घटाउनुपर्ने कतिपयको तर्क छ । सँगसँगै पुँजी बढाएपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउनुपर्छ भन्ने विकास बैंकहरुको राष्ट्र बैंकसँग माग पनि छ । पुँजी वृद्धिपछि नाफा बढाउन सकस भइरहेको, तरलता संकुचनको समस्या कायमै रहेको बेला विकास बैंकहरुको रणनीति के छ त ? भन्ने विषयमा केही दिनअघि कर्पोरेट नेपाल डटकमको टेलिभिजन कार्यक्रममा गरिमा विकास बैंकका सिइओ गोविन्द ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सार यस्तो छः
तपाईंकै बैंकबाट कुरा सुरु गरौं । के छ गरिमा विकास बैंकको पछिल्लो स्थिति ?
गरिमा विकास बैंक काठमाडौं आएको झन्ढै एक वर्ष हुन लाग्यो । अहिले हामी ४९ वटा शाखा कार्यलयबाट कारोबार गरिरहेका छौं । आजसम्म बैंकको निक्षेप १६ र ७५ छ भने कर्जा १६ र २५ करोड पुगिसकेको छ । दुई लाख ५० हजारलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । थप १० वटा शाखा सात वटा प्रदेशमा खोल्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका छौं । गरिमाको वित्तिय अवस्था दिन प्रतिदिन राम्रो हुँदै गएको छ ।
तोकिएको पुँजी त पुगिसक्यो गरिमाको । तै पनि कुनै संस्थालाई गाभ्ने वा कसैसँग मर्ज हुने योजना छ कि छैन ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको २५० करोडको पुँजी थियो । हाम्रो २५३ करोड पुगिसक्यो । साधारणसभाले मर्जरको प्रस्तावलाई पनि पास गरेको छ । हामी मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका छैनौं । तर, जहाँ हाम्रा शाखाहरु विस्तार भएका छैनन्, त्यस्ता स्थानमा एक जिल्ला वा दुई जिल्लाको लागि भने मर्ज गर्ने सोचमा छैनैं । एकाध संस्थासँग हामीले कुरा गरेका पनि थियौं । त्यसको रिजल्ट आइसकेको छैन ।
पुँजी बढाउने कुरामा राष्ट्र बैंकले फेरि निर्णय गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ । फेरि पुँजी बढाउनुपर्छ भनियो भने बैंकिङ क्षेत्र त्यसका लागि तयार हुन्छ ?
यो भन्दा बढी पुँजीलाई बढाउँदा त्यो बढाउने क्षमताको व्यवसाय छ की छैन ? एउटै क्षेत्रमा अत्याधिक पुँजी लगानी गर्दा देशलाई भार हुन सक्छ । र, अब पुँजी बढाउने सम्बन्धमा कुरा आयो भने अझै मर्ज गराउने र बैंकको सङख्या घटाउने सोच रहेको भन्ने बुझिन्छ । विकास बैंकहरु ३६ वटामा आइसके । तर, कमर्सियल बैंक सोचेको जस्तो मर्ज नहुँदा फेरि त्यसलाई घटाउनका लागि पुँजी बढाउने नियम भन्दा पनि बाइफोर्स मर्जको पोलिसी आउला । पुँजी बृद्धि गर्न दिने नियम आएमा त्यो अनुसारको व्यवसाय गर्ने ठाँउ हामीसँग छैन् । त्यो क्यापिटललाई हाम्रो अवस्थाले थेग्न सक्दैन् ।
पुँजी बढाउने कुराले प्रत्यक्षरुपमा असर गर्ने भनेको नाफामा हो । अहिले धेरै बैंकलाई पूरानो अनुपातमा नाफा कमाउन धौधौ भएको छ । तपाईंहरुलाई कत्तिको कठिनाई भएको छ ?
एउटा बैंकलाई मात्र फरक पर्दैन । समग्र बैंकमा जस्तो असर पर्छ, त्यस्तै असर गरिमालाई पर्छ । किनकी गरिमालाई मात्र फरक पर्ने हुँदैन । पुँजी वृद्धि चार गुणामा भयो गत वर्षको तुलनामा यो वर्षमा । एकै बर्ष नहुँदै पुँजी वृद्दि हामीले सोच्न पनि हुँदैन । लगानीकर्ताले पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पनि प्रतिफल पाउँछु भन्ने सोच्न हुँदैन् । त्यो किसिमले व्यवसाय विकास हुनसक्ने स्थिति छैन् । अहिले सबैं बैंकले शाखा विस्तारमा ध्यान दिनुको कारण आगामी वर्ष व्यवसाय गर्नको लागि त्यो गरेका हुन । आगामी दिनमा ठूलो क्यापिटललाई धान्ने व्यवसाय गर्नलाई शाखाहरु सक्षम हुन्छन् । फेरि रिर्टन पूरानै अवस्थामा आउँछन् ।
पुँजी वृद्धिकै कारण बैंकहरु सेवामुखी भन्दा धेरै नाफामुखी भए भन्ने गुनासो बढेको छ । बैंकहरु धेरै नाफामुखी हुन सुहाउँछ ?
बैंक भन्नु नै नाफा कमाउनका लागि हो । बैंक घाटामा जानु हुँदैन् । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । सेवा एउटा पाटो हो । बैंक एउटा व्यापारको पाटो हो । कुनै पनि व्यवसाय गर्दा नाफाको लागि गर्छ । कतिपय लगानीकर्ताले ऋण लिएर बैंकमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुलाई रिर्टन दिनुपर्छ हामीले । तर, यसको अर्थ नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिएर बैंक अगाडी बढेका छैनन् । बढ्दैनन् । मिडियामा आएजस्तो बैंकले नाफा खान नहुने हैन । बाँच्नको लागि र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि बैंकले नाफा खानुपर्छ । बैंक सेवा केन्द्रित हुन पर्छ । हिजोको दिनमा सामान्य कर्जा लिनको लागि ठूलो झन्झट थियो । तर, अहिले बैंकहरु ग्राहक खोजेर घर घर गएका पनि छन् । तपाईंहरु काम गर्नु, हामी लगानी गर्छौं भन्ने सोचका साथ बैंकहरु अगाडी बढिरहेका छन् । बैंक र व्यवसायी भनेको एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्री हो । उद्योगीले काम गर्नको लागि हामीले जानेका कुरा सेयर पनि गरेका हुन्छौं ।
तपाईंहरु घरजग्गा र गाडिहरुमा लगानी गर्न लालयित हुनुहुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन के समस्या हुन्छ र ?
हिचकिचाहट हैन । यसमा हाम्रो बुझाइ फरक छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गनुपर्छ भन्ने नियम पनि छ हामीलाई । हामीले धेरै सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ । एउटै क्षेत्रमा लगानी गरेर पनि हुँदैन् । महँगो कस्टको कारण पनि बैंकले उत्पादनील क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन । हो, गाडी र घरजग्गाको क्षेत्रमा अलिकति लगानी बढी भएको हो । एउटा गाँउ भरिको उदाहरण के छ भने कसैले पनि म उत्पादनशील क्षेत्रका लगानी गर्छु, लगानी चाहियो भनेर आउँदैन । गाँउगाउँमा जहाँ जे को सम्भावना छ त्यहाँ लगानी गरौं भन्दा कोही आउँदैन् । अहिले के भइरहेको छ भने छिटो धनी हुन छ हामीलाई । त्यही भएर सबै नेपाली विदेश गइरहेका छन् । नेपालमै बसेर केही गरेर देखाउँछु भन्नेहरुको कमी भएकाले लगानी नगरिएको हो । उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारको व्यवस्थापन नगरिदिनु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्नु हो ।
विकास बैंकहरु एकपछि अर्को गरि घट्ने क्रममा रहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विकास बैंकको भविष्य के देख्नुहुन्छ अहिले ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जको अवधारणा बैंकलाई सहयोग गर्नको लागि आएको बुझ्छु म । किनकी ९० वटा विकास बंैंक घटेर अहिले ३६ मा झरेको छ । भित्रैदेखि मर्ज हुनपर्छ भनेर विकास बैंकहरु अगाडी बढेका हुन् । अहिले राष्ट्रियस्तरको १२ वटा विकास बैंक मात्र रहेका छन् । हिजोका दिनमा बैंक भनेको केहो भन्ने ग्रामीण क्षेत्रकालाई थाहा थिएन । तिनीहरुलाई विकास बैंकले बैंकिङ च्यानलमा ल्याएका हुन । त्यसैले आगामी दिनमा विकास बैंकको भविष्य राम्रो छ । विकास बैंकको शाखा बढी ग्रामीण एरियामा बढी छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा ल्याउने र आफ्नो क्षमता बढाउने भएकाले विकास बैंकले राम्रो भूमिका खेलेका छन् । हिजोका दिनमा र आजका दिनमा पनि राम्रो भूमिका खेलेका छन् । बैंक मर्ज भए पनि शाखा वृद्धि हुँदैछन् । बैंकको नाम कम भएको हो । शाखाको सङख्या बढिरहेको छ । तर, कर्मसियल बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सक्दैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरुको नीति नियम पनि उत्कृष्ट हुँदैन् ।
बाणिज्य बैंकहरुलाई हरेक ठाउँमा पुगिसके । अधिकांश बाणिज्य बैंकहरु आक्रामण बजार विस्तारमा छन् । यो स्थितिमा उनीहरुसँग विकास बैंकहरुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन ?
हिजोका दिनमा कर्मसियल बैंकको डेढ अर्ब पुँजी धेरै थियो । र, हिजो हामीले कर्मसियल बैंकसँग खासै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थिएन । तर, आज विकास बैंकको पुँजी धेरै रहेको छ । आजका दिनमा प्रतिस्पर्धामा विकास बैंकभन्दा कर्मसियल बैंक अगाडी छन् । प्रतिस्पर्धा र शाखा वृद्धि भएका अवस्थामा ग्राहकले राम्रो र अनुकुल बैंकबाट सरल तरिकामा सेवा लिन्छन् । उनीहरुले रोजेर सेवा लिने स्थिति अगाडी आउँछ । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धाबाट अगाडी जान विकास बैंक सक्षम छन् । अहिले पनि ६० प्रतिशत जनता बैंकबाट बाहिर रहेका छन् भन्ने समाचार आएको छ । अब, शाखा विस्तार गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा पनि काम र सरकारको लक्ष्य पनि सफल हुने भएकाले सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिनुपर्छ ।
सबै ठाउँमा बाणिज्य बैंकहरु पुग्ने, नयाँ प्रोडेक्टहरु पनि उनीहरुले ल्याउने हो भने विकास बैंक किन चाहियो र भन्ने कतिपयको प्रश्न पनि जायजै देखिन्छ नि त ?
हिजो नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रशस्त शाखा खोलिएको भए किन प्राइभेट बैंक चाहिन्थ्यो ? त्यसकारण वाणिज्य बैंकको शाखा हुनु र विकास बैंकको शाखा नहुनुमा केही अर्थ राख्दैन । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा तात्विक भिन्नता पनि छैन । यी दुईबीचको फरक भनेको हामी एलसी गर्न पाउँदैनौ र हामीले नेपाल सरकारको बैंक ग्यारेन्टी पाउँदैनौ । अरु कुरामा हाम्रो केही फरक छैन । विकास बैंक पछाडी छैन । विकास बैंकमा काम गर्नलाई सजिलो छ । बैंङिक सेवा नबुजेका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि विकास बैंक नै अगाडी छन् । वाणिज्य बैंकका शाखा भएका ठाँउमा विकास बैंकका शाखा खोल भन्नुपर्ने अवस्था छैन । किनकी वाणिज्य बैंक भएका ठाँउमा विकास बैंक र विकास बैंक भएका ठाउँमा वाणिज्य बैंक नजाने भनेर स्थानपना भएको पनि हैन । हामी बाणिज्य बैंक भन्दा कम छैनौं आइटी क्षेत्रमा । हामी वाणिज्य बैंकका बराबर सेवा दिन सक्षम छौं । वाणिज्य बैंकका सेवासँग हामी बराबर छौं मात्र नामको हिसावले मात्र वाणिज्य बैंक र विकास भएकाले विकास बैंकको काम छैन भन्न त मिल्दन ।
अहिले भनिएको छ नि हरेक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्याउने, हरेक नेपालीको खाता खोल्ने । यो सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कति बर्ष कुर्नपर्ला ?
बैंक वित्तिय संस्था प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा खोल्न लालायित छन् । यसमा नेपाल सरकारले बैंकलाइ सुरक्षाको नीति, बत्ति र बाटोको व्यवस्था गर्छ भने चाँडै सम्भव छ । नेपाल सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकको साइडबाट भन्दा पनि सरकारको भूमिकामा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । सरकारले यति व्यवस्था गर्ने हो भने जुनसुकै ठाउँमा बैंक वित्तीय संस्था जान्छन् । यसको लागि सरकारले कति छिटो विकास गर्छ ? त्यसमा निर्भर रहन्छ । स्थानीय सरकारले गर्ने हो की ? प्रोदेशिक सरकारले होकी ? केन्द्रिय सरकारले गर्ने हो ? सबै आवश्यक तत्वको पहुँच पुगेमा छिटै हुन्छ ।
बाहिर प्रविधिले गर्दा सबै काम घरैबाट, मोवाइलबाटै हुन थालिसक्यो । नेपाला अझै लाइन बस्नुपर्ने, ऋण लिँदादेखि खाता खोल्दा धेरै फारमहरु भर्नुपर्ने समस्या छ । यो समस्या कहिलेसम्म समाधान होला नेपालमा ?
अहिले नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेका प्रविधि अन्य देशमा भएका नै हुन । अहिले त घरबाटै एउटा बैंकको माध्यमबाट अर्को बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ । सेयरमा लगानी, स्कुल फी, जस्ता कुरा मोबाइलबाटै गर्न सकिने अवस्था छ । अब यी कुराको लागि तपाई बैंकमा धाउनुपर्ने झन्झट छैन् । कर्जा लगानीको लागि भने धेरै कागजपत्रको झन्झट छ । ल्यापचेलाई आधिकारिक सिग्नेचर मान्ने भएकाले त्यसमा चाँही अहिले सम्भव छैन । डिजिटल सिग्नेचरलाई आधिकारिक मान्ने संयन्त्र विकास भएको छैन । यसको लागि एउटा कुरो धितो सिन हो । बिना धितो लगानी गर्दा नेपाल सरकार प्रावधानले दिँदैन । यसले गर्दा एउटा प्रोजेक्ट फाइनान्स कसैले गर्छ भने त्यसलाई धितो लिएर एक प्रतिशतमा मात्रै प्रयोजन गर्नपर्छ । त्यही अनुसार नेपाल सरकारले प्रावधान ल्याउनुपर्छ । साथै, इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रबाट, मिडियाबाट आएका मेललाई पनि आधिकारिक मान्यता दिने हिसावको नियम बनाउन आवश्यक छ । त्यसपछि तपाईंले भन्नुभएको समस्या हट्छ ।
तरलताको समस्या अझै छ भनिन्छ । किन यो समस्या अझै समाधान हुन नसकेको ?
तरलताको समस्या गत वर्ष पनि यही समयमा थियो । गत वर्ष कर्मसियल बैंकले १४ प्रतिशत र विकास बैंकले १५ प्रतिशत ब्याज मुद्दतीमा दिएको अवस्थ थियो । अहिले पनि यही समयमा आएर यही समस्या देखियो । यसको कारण पुँजी वृद्दि हो । त्यो समस्यालाई रोक्नको लागि संचालक समितिले सिइओलाई प्रेसर गर्ने, साधारणसभाबाट संचालक समितिलाई प्रेसर गर्ने गर्यो भने रोकिन सक्छ । अहिले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । तर, पैसाको अभाव हैन । अभाव भन्दापनि क्रेडिट क्रन्च देखिएको हो । प्रायः बैंकिङ सेक्टरमा एभरेजमा ७९ प्रतिशत लगानी छ । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा माथि हो । अहिले रेमिट्यान्स पनि घटेको छ विदेश जानेको सङख्यामा कमि आएकाले । सरकारले पुँजीगत खर्च समयमा नगरेकाले पनि साधारण खर्च पनि बढी भएपछि यो समस्या देखिएको हो । इम्पोर्ट बढी भएकाले पनि यो समस्या आएको हो । यसलाई समाधान गर्नको लागि त खर्च बढाउने राष्ट्र बैंकले सहज परिस्थित ल्याउन पहल गर्नपर्यो । मासिक रुपमा यसको काउन्ट गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले पनि सहज बनाइदिएको छ ।
विकास बैंकका कतिपय सिइओले उठाउने गरेको त्यही पुँजीमा हिजो बाणिज्य बैंकलाई सम्पूर्ण कारोबार गर्न दिने आज विकास बैंकलाई किन नदिने भन्ने छ । त्यो खालको बर्गीकरण हटनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईं हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा देखिएको भिन्नतामा सरकारी खाकाको कुरा हो । यसमा मैले पनि धेरै पहल गरें । एउटा डेभलपमेन्ट बैंक इन्डष्ट्रिको प्रथम उपाध्यक्ष्यको नाताले यसमा राष्ट्र बैंक पूरै सहमत छ । तर अर्थमन्त्रालयमा पुगेर अन्तिम अवस्थामा यो कसरी बिग्रियो ? हामीलाई थाहा छैन् । कसैले लबिङ गरेर हो की ? यसमा कमर्सियल बैंकको सट्टामा विकास बैंकलाई पनि सरकारी खाताको सञ्चालन गर्ने वातावरण भयो भने अहिले शाखा नपुगेको स्थानीय निकायमा शाखाको विस्तार हुन्छ । त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण विकास बैंकका शाखा प्रत्येक स्थानीय निकायमा पुर्याउन एकदम तयार छन् ।
अहिले सेयर बजारमा निकै उचार चढाव छ । तपाईंलाई के लाग्छ यो उतार चढाव स्वाभाविक हो वा प्रयोजित हो ?
डिमाण्ड भन्दा सप्लाई बढी भयो । सप्लाई बढी भएपछि अर्को संस्थाको सेयरमा लगानी गर्नको लागि २०० को सेयर १५० रुपियाँमा बेचेर भए पनि १०० रुपियाँको सेयर लिन्छु भन्ने धारणा सिर्जना भयो । आफूसँग अतिरिक्त पैसा नभएपछि भएको सेयर बेचेर अर्को सेयर लिन्छु भनेर यो अवस्थामा आएको हो । त्यसकारण सेयरको मूल्य घट्दै गएको हो । यहाँ भन्दा तल सेयर घट्ने ठाँउ छैन । सेयरको मूल्य घट्नु भनेको सप्लाइ बढी भएको छ । अहिले हाइड्रोपावर, इन्स्योरेन्सको सेयर प्रशस्त आइरहेकाले अब सेयर बढ्ने छ । यसको लागि कर्जाको नीतिमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
अन्तिममा बताई दिनु न बैंकिङ क्षेत्रमा गरिमा विकास बैंकको फरक पहिचान के हो ?
सबभन्दा पहिला गरिमा विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर स्थापना गरेको बैंक हो । ग्रामीण क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएर हामीले बैंकलाई अगाडी बढाइरहेका छौं । काठमाडौंमा पाँच वटा शाखा रहेका छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै शाखा स्थापना गरिनुको कारण पनि यही हो । हामीले सबै बैंक वित्तिय संस्थाले दिने सेवाबाहेक अझ गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छौं । ग्राहकलाई यो बैंक मेरो हो भन्ने आभास दिलाउनका लागि बैंकले ठूलो मेहनत गरिरहेको छ । बिना धितो कर्जा दिएका छौं । राम्रो काम गर्छौं भन्नेहरुलाई तीन लाख रुपियाँ प्रतिव्यक्ति यो सेवा उपलब्ध रहेको छ । चालिस पचास करोड रुपियाँ ग्रुप ग्यारेन्टीमा कर्जा बिना धितो दिएका छौं । बैंकको सबभन्दा फरक पाटो भनेको सर्भिस हो । बैंक सेवा प्रदायक भएकाले यसको पहिचान यही हो । कमर्सियल बैंकले दिएको सम्पूर्ण सेवा गरिमाले दिएको छ । कर्मचारी साथीलाई हामीले सेवा प्रदायक बैंक बन्नुपर्छ भनेर भनेका छौं ।
गरिमा विकास बैंकको नयाँ शाखा दमकमा
ज्योति विकास बैंक र हाम्रो विकास बैकको एकिकृत कारोवार सुरु
गरिमा विकास बैंकको १३ प्रतिशत लाभांस पारित
गरिमा विकास बैंकले जनरल इन्स्योरेन्सको बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने
पच्चीस वटा विकास बैंकले गरे वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कुन बैंकको कस्तो अवस्था छ ?
सनराइज बैंक र गरिमा विकास बैंकबीच व्यापार साझेदारी सम्झौता
निराश भएर बसेका खतिवडा तब प्रफुल्ल भए, जब प्रदीप गिरिले बोल्न सुरु गरे (फोटो फिचर)
पोखराको चिप्लेढुंगामा देबेन्द्र स्पोर्टस् सञ्चालन
उपेन्द्रलाई सोधिएको प्रश्नको शैली र शब्द ठिक भएन भन्दै एभिन्यूजलाई स्पष्टीकरण
एशियन फर्मास्युटिकलमा भीषण आगलागी
एनसेल र पुल्चोक क्याम्पसबीच छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मानलाई निरन्तरता दिन सहमति
अजय सुमार्गीको ‘हेलो नेपाल’लाई चार अर्ब ३१ करोड लाभकर बुझाउन राजश्वको निर्देशन
दैलेख ठाँटीकाँधमा एनसीसीको शाखा
काँग्रेसले बनायो छाँया सरकारः मिनेन्द्र अर्थमन्त्री, गगन शिक्षामन्त्री
सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा युवाको आकर्षणः १४ हजारभन्दा बढिले पाए कर्जा
सेयर बजारको गिरावट दर बढ्यो, शिवमको सेयरमा पनि गिरावट